Singa 11 tena ilaina amin'ny lahatsoratra bilaogy mahasarika | Martech Zone
Talata, Janoary 7, 2014 Zoma 6 Novambra 2020 Douglas Karr
Ny sasany amin'ireo atiny tsara indrindra hitanao amin'ny tranonkala dia hitranga rehefa afaka manao dingana sarotra ianao ary manamora azy. Copyblogger dia nanao an'izany ity sary amin'ny famoahana lahatsoratra bilaogy ity. Ny lafiny rehetra amin'ny torohevitra dia ny manadio sy manadio ny lahatsoratra hahazoana sy hitazonana ny mpamaky. Misy lakile vitsivitsy mialoha & afters koa…
Talohan'ny - soraty amin'ny a sehatra voaatsara tsara mahafinaritra izany, mamporisika ny fizarana ary manome antso ho an'ny mpamaky mba hirotsaka bebe kokoa (famandrihana, fisintomana, mpikambana, sns.).
taorian'ny - hampiroborobo ny bilaoginao manerana ny tamba-jotra sosialy hahazoana mpamaky bebe kokoa ary ampidiro ao amin'ny marketing mailakao hitazomana ireo mpitsidika ireo hiverina!
Raha te-hamaky ny lahatsoratr'i Copyblogger ianao amin'ny iray amin'ireo singa 11 dia ity no aleha:
Asa-tanana a lohateny andriamby.
Sokafy amin'ny baomba.
Use teny mandresy lahatra.
Soraty fehezanteny tsara.
Ampidiro mpamono olona teboka bala.
mamorona subheads mahafinaritra.
Lazao ny mpamitaka Tantara.
Tazomy ny sain'ny cliffhangers anatiny.
Misafidiana an sary fisamborana.
Farano amin'ny fomba.
Tags: maha-azo itokianabilaogyteboka balacopybloggerlohatenyny fomba fanoratana lahatsoratra bilaogyfampiasana sarylisitry ny entanaListskopia mandresy lahatralohatenyfanoratana tantaralohatenikely
Janoary 7, 2014 amin'ny 10:57 PM
Misaotra amin'ny famintinana eo amin'ny faran'ny lahatsoratra. Somary sarotra vakina ny infografika